ससुराले सविताको शरिर छोएको भन्दै सविताकी बहिनीले ति भिडियो सार्बजनिक गरेको भन्दै सविताको अमाजुका श्रीमान मिडियामा (भिडियो) – Purba Aawaj
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २४, २०७८ समय: ११:२१:०९
काठमाडौ । तपाई आफै कल्पना गर्नुस् ८० वर्ष नाघेको एक वृद्धले बुहारीलाई त्यस्तो कसरी गर्न सक्छ ? जुन वृद्ध आफै अगाडी अक्सिजन लगाएर बसेका छन् ।
उनलाई आफ्नो दैनिकी काम गर्न पनि अरुको सहा,रा चाहिन्छ । चितवनकी सविता भण्डारी मृ`त्यु घ`टना पछि उनका वृद्ध ससुराले गर्ने ब्यव`हारलाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै तर्क वित`र्क भइरहेको छ । बोल्न र उभिन पनि नसक्ने वृद्धले कस्तो कृ`याकला`प गर्छ ? हाँसेर त्यस्तो पनि भिडियो हुन्छ सविता भण्डारीको अमाजुको श्रीमानले राखेको तर्क हो यो ।
शरिरमा हात लगाएको भनेर फोटो खिचि,एको र भिडियो बनाउन लगाएको हो । उनले भने, यदि त्यस्तो थियो भने १० महिना पछि यो कुरा निस्कनुको अर्थ के हो ? भिडियोमा उनको ससुरालाई देखाइएको छ । ससुराले सविताको शरिर छोएको भन्दै सविताकी बहिनीले ति भिडियो सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
सविताले आफै मृत्युको निर्णय नलिएको, परिवारले उनलाई बाध्य पारेको भन्ने आरोप लगाउँदै सविताका माइती पक्षले घटना छानविनको माग राखेका छन् । यस विषयमा अनुसन्धान प्रकृया जारी छ । तर सविताको बहिनीले आफ्नो दिदीलाई उनका ससुराले नराम्रो ब्यव`हार गर्ने गरेको पुष्टि गर्ने कोशिष गर्दैछन् ।
Last Updated on: June 7th, 2021 at 11:24 am